Sebenzisa uVavanyo oluzenzekelayo ukuphucula amava okuThengisa | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 4, 2020 NgoLwesibini, Agasti 4, 2020 UMahendra Alladi
Ukuhlala ngaphambi kotshintsho olukhawulezileyo kunye nokwenza izinto kwiqonga lamashishini amakhulu, anje ngeSalesforce, kunokuba ngumceli mngeni. Kodwa iSalesforce kunye I-AccelQ basebenza kunye ukuhlangabezana nocelomngeni.
Sebenzisa iqonga lolawulo lomgangatho we-agile ye-AccelQ, elidityaniswe ngokuqinileyo kunye ne-Salesforce, ikhawulezisa kakhulu kwaye iphucula umgangatho wokukhutshwa kweSalesforce yombutho. I-AccelQ yinkampani yeqonga lokusebenzisana elinokusebenzisa ukuzenzekelayo, ukulawula, ukwenza, kunye nokulandela umkhondo wovavanyo lweSalesforce.
I-AccelQ kuphela kovavanyo oluzenzekelayo lovavanyo kunye neqonga lolawulo elidweliswe kwifayile ye- Ivenkile yeAppExchange. Ngapha koko, uninzi lwabathengi beshishini lakwaSalesforce baqinisekisile iAccelQ, inikwe ixabiso eliletheleyo ukulungiselela ukwenziwa kwemijikelezo yabo yokuKhululwa. I-AccelQ igqibe kwinkqubo yovavanyo engqongqo ukuze idweliswe kwi-Salesforce AppExchange. Ngapha koko, uninzi lwabathengi beshishini lakwaSalesforce baqinisekisile iAccelQ, inikwe ixabiso eliletheleyo ukulungiselela ukwenziwa kwemijikelezo yabo yokuKhululwa.
Iplatifomu yoLawulo oluGqibeleleyo
I-AccelQ liqonga lolawulo lovavanyo olupheleleyo elinceda amashishini ukuba ahambise ukumiliselwa komgangatho weSalesforce. Ukubanjwa kwilifu, iAccelQ iyakhawuleza kwaye kulula ukuyicwangcisa kuneProvar okanye iSelenium.
Izixhobo ezikhoyo ezizama ukwenza uvavanyo lweSalesforce aziphumeleli kuba azikwazi ukuzisa imbono yeshishini. Kwaye bayasilela ukuphatha ujongano lomsebenzisi olunamandla lweSalesforce kunye nezinto zalo. I-AccelQ yenza lula, isebenze, kwaye ikhawulezise uvavanyo oluzenzekelayo lweSalesforce kunye neSalesforce Universe yayo, isisombululo esikhethekileyo seAccelQ sokuxhasa i-ecosystem ecosystem.
I-Salesforce inokuba yinkohliso entle ngomxholo wayo wewebhu onamandla, iiframes, kunye neVisualforce, ukubiza ngambalwa, kudityaniswa nesidingo sokuxhasa umbane we-Salesforce kunye nohlelo lwakudala. I-AccelQ ngaphandle komthungo iphatha zonke ezi zinto zinzima kwi-no-code automation elula ekhoyo kwilifu. Ukuphunyezwa kunye nokukhutshwa kwemijikelezo kukhawuleze ngokubonakalayo kwiAccelQ's Salesforce isiseko sabathengi ngelixa ihambisa umgangatho ophezulu kwishishini ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ii-suites zovavanyo ze-AccelQ zoVavanyo oluphatha imodyuli esekwe okanye isicwangciso esisekwe kuvavanyo olusebenzayo, ukwenziwa, kunye nokulandela umkhondo ngezicwangciso ezilungiselelwe kwangaphambili. Ivumela iinkampani ukuba zilandelele iimeko zovavanyo ezenziweyo ngenkqubo yokujonga imbonakalo kwaye inike amandla imijikelezo yokuqinisekisa ngokukhawuleza kunye notshintsho oluqhubekayo loqwalaselo kuphumezo lwabo lweSalesforce.
I-Packforce Content Pack ikhawulezisa i-automation yovavanyo lwe-Salesforce kunye nomhlaba ochazwe ngaphambili we-Salesforce, ulwimi oluzenzekelayo olungenakhowudi, kunye nohlalutyo lwempembelelo oluzenzekelayo. Iinkampani zinokufezekisa ukukhawulezisa okungaphezulu kwe-3x kwinqanaba lokuqinisekisa umgangatho wokuphunyezwa kwe-Salesforce.
Uvavanyo lokuZenzekelayo kunye noLawulo
I-AccelQ ibonelela ngovavanyo oluzenzekelayo olukhawulezayo nolulula, njengeSalesforce. Inika:
Imodeli ebonakalayo yenkqubela phambili ye-Salesforce kunye neenkqubo zeshishini
Akukho khowudi yokuzienzekelayo ilula kwaye inamandla
Ukucwangciswa kovavanyo olunengqondo kunye nokuphunyezwa kwelifu okwenziwe ngokudityaniswa okuqhubekayo
Ulawulo olunzulu lovavanyo olunokulandeleka okwakhelwe ngaphakathi kuzo zonke iiasethi zovavanyo
Idashboard yedilesi yokulandela umkhondo kunye nokwenza ingxelo eneenkcukacha
Kwakhona, i-AccelQ igcwalisa i-Selenium yeenkampani ezifuna ukuzenzekelayo ukuvavanywa kwesicelo seSalesforce kunye neSelenium, ngakumbi xa kuvavanyo olwenziwayo lodwa alunakugubungela iimfuno zovavanyo lovavanyo.
Izicelo ezakhelwe kwi-Salesforce zinzima kwaye zinokuba ngumceli mngeni kuvavanyo ngeSelenium. I-AccelQ ivumela abavavanyi ukuba bavelise iimeko zovavanyo kwi-Salesforce ngokulula kwaye zonyuse amandla kaSeleninium, iyenze ukuba ithembeke, ihlaselwe, kwaye ingabizi mali.
Isifundo seMeko yoVavanyo lweAccelQ
Umthengi omnye weSalesforce yenza ukuba abasebenzisi bayo beshishini lokuthengisa babenamandla ovavanyo oluzenzekelayo, kwi-sprint evela kwi-AccelQ
Umthengi, ulwazi lwehlabathi, idatha, kunye nenkampani yokulinganisa esekwe e-UK, ifuna ukuphucula amava omsebenzisi kunye nomgangatho kunye nokuqina kwenkqubo yolawulo lobudlelwane kubathengi bayo. Ukuphunyezwa kwe-Salesforce kwakubaluleke kakhulu kwishishini, kodwa phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ukuvavanywa kwakhona kwakuya kuthabatha isixa esikhulu semithombo.
Ke umthengi ufuna:
Ngokuzenzekelayo ukuqinisekiswa kwenkqubo yeshishini kwiimodyuli ezahlukeneyo zoThengiso
Bamba ubunzima bolawulo lweSalesforce Lightning kulawulo oluzenzekelayo
Nciphisa uvavanyo lwencwadi ukusuka kwiintsuku ezininzi ukuya kwiiyure ezimbalwa
Ukujongana ngokufanelekileyo nesakhelo esenziwe ngamandla kunye nesakhelo kwiNtengiso kunye nokuphepha ukugcinwa ngaphezulu
Nika amandla iqela loshishino ukuba lenze i-in-sprint automation
Izibonelelo zeshishini zeAccelQ, zibandakanyiwe:
Ngokukhawuleza, ukukhutshwa komgangatho ophezulu we-Salesforce
Imigudu yovavanyo lwemihla ngemihla yokuncitshiswa kuncitshisiwe kwiiyure ezimbalwa zohlengahlengiso oluzenzekelayo
Ukuncitshiswa okubalulekileyo kwindleko kunye nomzamo
Iimodareyitha ezenza ukuba kuphuculwe inkqubo entsha yeshishini ngokuzisebenzisa ngaphezulu kweepesenti ze-80
Amaqela ovavanyo avunyelwe ukuyila kunye nokuphuhlisa i-automation ngaxeshanye kunye nokuphunyezwa kwento entsha
Ukugqwesa kwezobugcisa kunye nezibonelelo ezizinzileyo
Ukuziqhelanisa nezona ndlela zilungileyo kunye nemigaqo yoyilo yokujongana ngokungagungqiyo nezinto ezixhalabisayo kunye nokulandeleka
Uvavanyo lweSalesforce kunye nokuzenzekelayo kufuna ubuchule obungaphezulu ngenxa yoxinzelelo lwexesha lokumiliselwa kunye nokuphunyezwa. Amandla e-AccelQ axhotyiswe ngokukodwa ekulungiseleleni ukusetyenziswa kweeasethi zovavanyo oluzenzekelayo ngaphandle kobunzima bobuchwephesha kunye neentloko ezingaphezulu. Nge-AccelQ, amashishini anokuxhobisa abasebenzisi bawo beshishini kunye nabanye abathathi-nxaxheba kwaye bafumane ukubonakala okupheleleyo kumgangatho wozalisekiso lwabo lweSalesforce.
Isilingo sasimahla seAccelQ yeNtengiso
tags: etshintshiInkqubo yokuqhuba ishishini ngokuzenzekelayouvavanyo oluzenzekelayo lokulungisaInkqubo yokuqhuba ishishiniukuthengisaindawo yokuthengisaIpakethe yomxholo wabathengisiumbane wabathengisiUvavanyo lwabasebenziseleniumuvavanyo oluzenzekelayoulawulo lovavanyoukuvavanya ukuzenzekelayoamandla obon
UMahendra nguMsunguli kunye ne-CEO ye-accelQ, iqonga lokujonga ngokuqhubekayo elenziwa lilifu elizenzekelayo lisebenzisa i-API kunye novavanyo lwewebhu ngaphandle kokubhala umgca omnye wekhowudi.